Doorka Qurbajoogga Somaliland ee dhanka siyaasadda waxa ka mid ah inay kaalin mug leh oo muuqata ku leeyihiin dadaalka aqoonsi u raadinta madaxbanaanida aaya-ka-tashiga umadda Somaliland, iyo sidoo kale nidaamka siyaasada dimuqraadiyadda ku dhisan ee dalku qaatay sida uu jideeyay dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Qurbajoogga Somaliland waxa ay door weyn ka soo qaateen, welina ka ciyaaraan aas’aaska iyo hirgelinta hannaanka xisbiyada
badan ee ka hana qaaday dalka Jamhuuriyadda Somaliland sida waafaqsan dastuurka qaranka.Waxa tan halbeeg u ah ama lagu cabbiri karaa in aas’aasayaashii ururo siyaasadeedyadii ugu badnaa ee u tartamay
doorashoodadii u dambaysay ee dawladaha hoose 2012-kii inta badan boqolkiiba ahaayeen dad qurbajoog ah ama soo ahaan jiray, welina xubno badan oo taageero dhaqaale iyo talaba ku leh yihiin axsaabta qaranka, ka qaybgalkooda doorashooyinkii goleyaasha deegaanka iyo
baarlamaankaba, sidoo kale tirada xubnaha qurbajoogga ah ee xilalka kala heerarka duwan ee qaran ka qabanaya dalka oo iyana marba marka ka dambaysa soo kordhaya. Waxa xusid mudan in labada musharrax ee jagooyinka madaxweyne iyo madaxweyne-ku-xigeen gaar ahaan xisbiyada UCID iyo Waddaniba ay qurbajoog soo ahaan jireen qaarkood sannado uun dalka joogay. Waxa kale oo xusid mudan in kumanaan qurbajoog ka kala yimaada wadamo badani ka soo qaybgalaan doorasho kasta oo goob joogeyaal iyo hawlwadeeno kala shaqeeya axsaabta xagga ololaha noqdaan.
Aragtida Qurbajoogga Somaliland ee Doorashooyinka Xorta ah:
Doorasho kasta oo si nabadgelyo iyo dimuqraadiyad ah uga qabsoonta dalka waxa ay aad iyo aad u dhiirrigelisaa qurbajoog badan oo si rasmi ah ugu soo noqda dalka iyo/ana soo maalgashada oo hantida dhismaha iyo ganacsiyo madaxbanaanba maalgashada waayo waxa ay aaminaan jiritaanka lagu kalsoonaan karo ee deganaanshaha siyaasadeed, nabadgelyada iyo bisaylka shacabka. Waxa tan tusaale u noqon kara doorashadii madaxtinimada ee 2010 ee Xisbiga Kulmiye talada dalka ku guulaystay oo dhiirrigelisay in qurbajooggii ugu badnaa dalka dib ugu noqdaan, soo degaan, waxka soo dhistaan, maalgashadaan ganacsiyo kala duwan, shaqooyin ka qabtaan hay’adaha qaranka iyo hay’adaha caalamiga ahba.
Qurbajoogga Somaliland waxa ee daafaha adduunku waxa ay si weyn ula dhacsanyihiin u diyaar garawga guud iyo habsamu socodka hawlaha doorashada madaxtinimada ee 13-ka Nov, 2017 u qorshaysan inay ka qabsoonto dalka oo ay qurbajogogu u arkaan in dawlad iyo shacabba si mutakarnimo ah loo gudanayo waajibaadkeeda.
Qurbajoogga Somaliland waxa ku faraxsanyihiin oo ay bogaadinayaan in ololaha loolanka aan turxaanta lahayn ee musharixiinta seddexda xisbi iyo taageerayaashoodu ku guda jiraan taasoo ay u arkaan nidaamka dimuqraadiyadeed dhab ah aan waxbadan kaga duwanayn doorashooyinka ka dhaca dalalka horumarsan ee ay joogaan qaarkood gaar ahaan wadamada reer galbeedka lagu magacaabo; isla markaana ah hibo iyo wanaag la majeerto oo Ilaahay waafajiyay bulshada Somaliland iyo hoggaankooda oo wadamo badan oo la aqoonsanyahay oo ka dhaqaale iyo khayraad badan Somaliland ay maanta ka qatan yihiin qaaradda Afrika iyo gobollo badan oo adduunka kale ahba. Waxa ay aad u bogaadinayaan qurbajoogga Somaliland doodaha tooska ah ee loo qabanayo musharixiinta ku tartamaya kursiga hoggaaminta qaranka, isu soo baxda ololaha doorashada ee seddexda xisbi qaran, hantida dawladda ee laga xameeyay in lagu ololeeyo, iyo warbaahinta qaranka ee lagu amray in la wadaago oo seddexda xisbi qaran u sinnaadaan baahinta wararka iyo barnaamijyada la xidhiidha ololaha. Qurbajoogga
Qurbajoogga Somaliland waxa ay ku bogaadinayaan Madaxweynaha JSL, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) hoggaaminta toosan ee hufnaanta shaqo qaran, xil gudashada, masuuliyadda, wadaninimada iyo waayeel talintu ka muuqato xagga diyaarinta hawlaha doorashooyinka, iyo siday uga go’aantahay Madaxweynaha inuu gaadhsiiyo dalka doorasho xor iyo xalaal ah oo si nabadgelyo leh uga qabsoonta dalka 13-ka November, 2017.
Gebogebada maqaalkan, Nimco weliba nusqaan lehe iyadoo aan la dafiri karin in soo bixitaankii xisbiyada badan ee siyaasadu oo woxoogaa dabac ah ku keenay midnimadii iyo wadajirkii qurbajoogga ku nool wadamada debadda, hadana waxa sidoo kale hubaal biyo kama dhib caan ah in hadba sawirka uga muuqda siyaasadda gudaha dalka uu saamayn weyn ku leeyahay kaalinta qurbajoogga ee geedi socodka horumarineed ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa tusaale xusid mudan in ay qurbajooggu aad u necebyihiin inay shaashadaha idaacadaha la iska arko ee dalka ka daawadaan magac reer ku hanjabaya iyo dad hadallo beelaysan iyo reer hebel isugu jawaabaya ama ku ololaynaya taasoo ay u arkaan dhaqan qabyaaladeed dib u dhacsan oo ah wax aan lagu aqoon wadan dimuqraadi ah oo nidaamka xisbiyada badan qaatay, loona baahanyahay in laga waantoobo dhaqanka noocaas ah.
Waxa soo saaray faalladan (Published by):